မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းခြင်း Display ကို LED
အဆောက်အဦးအပြင်ငှားရမ်းခြင်း Display ကို LED
တီဗီဘူတာ LED ဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကိုကွေး
SKY 3D မျက်နှာပြင် LED
ကွေးနဲ့ LED ဖဲကြိုး
မျက်နှာကျက် Cylinder LED
Fixed ကို LED မျက်နှာပြင်
ညီလာခံကြီးတွေနဲ့ LED Display ကိုငှားရမ်း
ဖြစ်ရပ်များ LED မျက်နှာပြင်ငှားရမ်း
ဖက်ရှင် Show ကိုခင်းကျင်းပြသ LED
တစ်ဦးချင်းစီ panel ကိုများအတွက် 7.8kg ထက်လျော့နည်း 1. အလင်းအလေးချိန်။
Splicing ၏ 2. အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်: 16 တစ်စုံလင်သော panel ကိုအချိုးနှင့်အတူ: ကိုအလွန်အောက်ရှိ splicing ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်, 9:3သို့မဟုတ် 16: 9, ပလြော့ HD ကို LED က display ကိုအလွယ်တကူ4မကြာခဏ-အသုံးပြုသောဗီဒီယိုကိုအချိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီအတွက် spliced ​​နိုင် သတ်မှတ် signal ကိုအရင်းအမြစ်နှင့်အချို့သောမြင်ကွင်းတစ်ခု၏ dual-အခြေအနေများ။
4. ပြီးပြည့်စုံသော Display ကို Effect: 160 °စူပါကျယ်ပြန့်အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ကြည့်ရှုထောင့်ကပိုအလားအလာဖောက်သည်ကိုဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါထုတ်လွှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုအဘယ်သူမျှမစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လိုင်းနှင့်အတူတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြောင်းလဲနေသောရုပ်ပုံများနှင့်အတူဆက်ဆံသည့်အခါပုံရဲ့အစွန်းချွန်နှင့်ရှင်းပါတယ်။
pixel အသံ (မီလီမီတာ)
Pixel သိပ်သည်းဆ (pixels ကို / ㎡)
Panel ကို Size ကို (မီလီမီတာ)
400 (W) 88 × 300 (H) (ဃ) ×
Panel ကိုဆုံးဖြတ်ချက် (W × H ကို)
သေဆုံး - လူမီနီယံ ချ.
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ် / PCs)
* မက်စ်။ Power Consumption (W / ㎡)
* ပျမ်းမျှ။ Power Consumption (W / ㎡)
တပ်ဦး / နောက်
ကြည့်ရှုခြင်း Angle (deg ။ )
160 (H ကို) / 160 (V)
ချိန်ညှိ 2000 ≤ TC ≤ 9300
programmable / အော်တို / လက်စွဲစာအုပ်
အရောင်အဝါများနှင့် chroma စံကိုက်ညှိ
ယခင်: SKY 3D မျက်နှာပြင် LED
နောက်တစ်ခု: FXI2.5 LED screen
3.9 မီလီမီတာ Led အမှတ်တရ
3mm Led အမှတ်တရ
4k Led အမှတ်တရ
4mm Led ဗီဒီယိုအမှတ်တရ
4mm Led အမှတ်တရ
Bendable Led ပြရန်
Bendable Led ဖန်သားပြင်
အကောင်းဆုံး Led ဗီဒီယိုအမှတ်တရ
Big Led ပြရန်
ဦးဆောင်ပြီး Display ကို Buy
Clear ကို Led ဖန်သားပြင်
ဖျော်ဖြေပွဲ Led အမှတ်တရ
ကို Creative ဦးဆောင်ပြီးပြရန်
ကို Creative ဦးဆောင်ပြီးဖန်သားပြင်
display Panel ကိုဦးဆောင်ပြီး
DJ Led ဗီဒီယိုအမှတ်တရ
ပြင်ပ Led ပြရန်
Flex ကို Led ပြရန်
Flex ကို Led ဗီဒီယိုအမှတ်တရ
Flex ကို Led အမှတ်တရ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဦးဆောင်ပြီး Display ကိုစျေး
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Led ကွက်များ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Led ဗီဒီယိုအမှတ်တရ
အပြည့်အဝအရောင် Led ပြရန်
အပြည့်အဝအရောင် Led ဖန်သားပြင်
ဧရာ Led ပြရန်
ဧရာ Led အမှတ်တရ
hd Led ပြရန်
HD screen ဦးဆောင်ပြီး
hd Led ဗီဒီယိုအမှတ်တရ
hd Led အမှတ်တရ
High Quality ဦးဆောင်ပြီးပြရန်
High Quality မျက်နှာပြင်ဦးဆောင်ပြီး
high resolution display ဦးဆောင်ပြီး
အကြီးစား Led ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်
အကြီးစား Led အမှတ်တရ
ဦးဆောင် Display ကိုကုန်ကျစရိတ်
ဦးဆောင် Pixel Display ကို
Led သင်္ကေတပြ scrolling
ကြမ်းပြင် 11, Lilan နည်းပညာအဆောက်အအုံအနောက်ဧရိယာ, Hi-Tech မှဇုန်, Guangming ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်